एपेन्डिसाइटिस कस्तो खाले रोग हो ? के कस्ता लक्षणदेखा पर्छन ? जानकारी लिनुहोस – सुदूरखबर डटकम
एपेन्डिसाइटिस कस्तो खाले रोग हो ? के कस्ता लक्षणदेखा पर्छन ? जानकारी लिनुहोस
label समाचार प्रकाशक query_builder May, 04 2019
एपेन्डिक्स एउटा पाइपजस्तो अङ्ग हो । यसको ल्युमेन बिस्तारै विभिन्न कारणहरुबाट बन्द हुन थाल्छ, र यो सुनिन्छ । सुन्निएपछि यसले एपेन्डिक्सको भित्तामा चाप दिन्छ । जुन चापका कारण भित्तमा रहेका रगतका नसाहरु बन्द हुँदै जान्छन् र पीप जम्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा पनि एपेन्डिक्सलाई अपरेशन गरी ननिकालिएमा यो फुट्न जान्छ,जसको कारण संक्रमण रगतको माध्यमबाट सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर मानिसको मृत्यु हुन्छ। एपेन्डिसाइटिस पश्चिमी मुलुकमा बढी देखिएको छ ।